Dhageyso:Sheekh Fu'aad oo Farriin adag u diray Maamulka 'Somaliland' Kadib Markii uu Mamnuucay Kitaabka Al-walaa Walbaraa.
Saturday December 19, 2015 - 10:11:34 in Wararka by Super Admin
Maamulka Ashahaadda ladirirka Somaliland isku magacaabay ayaa ku dhaqaaqay tallaab uu ku mamnuucayo qaar katirsan kutubada towxiidka oo laga akhrin jiray iskuullada iyo masaajidda.
Sheekh Fu’aad Muxamed Khalaf oo ka mid ah culimada Mujaahidiinta ayaa adag kaga hadlay go'aankii dhawaan kasoo baxay maamulka isku magacaabay Somaliland kaaasi oo mamnuucay in dhalinyarada da’dooda ka yar tahay 20 sano gabdho iyo wiil in aysan akhrisan karin kitaabka caqiidada ee Al-walaa Wal-baraa.
Sheekh Fu’aad waxa uu xusay in amarkaasi uu miijinayo sida maamulka Ashahaado la dirirka Somaliland ula dagaashanyahay diinta Islaamka,wuxuuna intaasi ku daray in dadka Muslimiinta ee ku nool dhulka uu ka arrimiyo maamulka Somaliland si aad ah loo dhibaateeyo.
Shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo deegaanada kale ee Waqooyiga Galbeed ayuu sheekh Fu'aad ugu baaqay in ay ka dhiidhiyaan tallaabada uu qaatay maamulka Siilaanyo isagoo si kulul ula hadlay maamulka Somalilan oo uu xusuusiyay in caalamka islaamka maanta uu kajiro baraarug diini ah oo aysan suurtagal aheyn in lays hortaago faafinta diinta islaamka.
Go'aanka uu maamulka Somaliland ku mamnuucay qaar katirsan kitaabada caqiidada ayaa imaanaysa waqti bilo ka hor maamulka calmaaniga Kurdiyiinta ee kajira waqooyiga Ciraaq sidaan oo kale u mamnuucay kitaabada ay qoreen sheykhul islaam Ibnu Teymiya,Cutheymiin iyo Al-albaani waxayna kitaabadaasi ku sifeeyeen kuwa muslimiinta Faraya 'Argagaxiso' wax ay ugu yeereen.
Halkan ka dhageyso Sheekh Fu'aad oo ka hadlaya maamulka Somaliland MP3